Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo soo dhoweeyay go’aankii Wasaaradda Arimaha Gudaha XFS ee doorashada Galmudug – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo soo dhoweeyay go’aankii Wasaaradda Arimaha Gudaha XFS ee doorashada Galmudug
Cali Gacal Casir, Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo soo saaray War-saxaafadeed ayaa soo dhoweeyay baaqii Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiinta ee Xukuumadda Soomaaliya, kaas oo ahaa in doorashada Galmudug waqtigeeda lagu qabto.
Guddoomiye Cali Gacal ayaa sheegay in uu dhamaad joogo muddo xileedka Baarlamaanka Galmudug iyo guud ahaan maamulkaasi islamarkaana uu soo dhoweynaya go’aanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ah in la qabto doorasho iyo shir weyne lagu heshiisiiyo beelaha daga Galmudug.
“Baarlamaanka Dowlad Gobaleedka Galmudug waxa uu soo dhoweynayaa go’aanka Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta DFS ay ka qaadatay hanaanka iyo waqtiyeenta doorashada dowlad gobaleedka Galmudug” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Galmudug.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir, oo soo xiganaya dhowr qodob ayaa gaba-gabadii amray hal qodob oo ah in xilka Golaha Wakiilada ay sii haayaan Xildhibaanada Galmudug ee ah 89-ka xubnood inta laga dooranayo xubno cusub oo badala.
“Waxaan amrayaa in Baarlamaanka DGGM ee ka kooban 89-ka xubnood uu sii shaqeeyo inta laga soo dooranayo Baarlamaan Cusub” ayaa lagu yiri gaba-gabadii War saxaafadeedkii ka soo baxay xafiiska Cal Gacal Casir Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Madaxweyne Xaaf oo ka soo horjeestay baaqii Wasaaradda Arimaha Gudaha XFS ee qabashada doorashada Galmudug